CPE firimu yeCPE apron
PEVA musono yekuisa chisimbiso tepi kune inoraswa inodzivirira clo ...
Ichi chigadzirwa ndicho chigadzirwa chedu chakatengwa zvakanyanya kubvira pasirese COVID-19 denda muna 2020. Imhando yePeva isina mvura tambo yakagadzirwa nezvinhu zvinowirirana, iyo inoshandiswa pakurapa isingaite mvura pamakumbo ezvipfeko zvekudzivirira. Inofananidzwa nePU kana machira-akavakirwa ekunamira mitsetse, ine mutengo wakaderera ...
Mvura-chiratidzo musono yekuisa chisimbiso tepi yenguo
Zvipenga zvisina mvura zvinoshandiswa pazvipfeko zvekunze kana zvishandiso semhando yetepi yekurapa musono isina mvura. Parizvino, izvo zvigadzirwa zvatinoita ndeye pu nemachira. Parizvino, maitiro ekushandisa isina mvura mitsetse pakurapa isina mvura seams yakave yakakurumbira zvikuru uye inogamuchirwa ...
PEVA musoni yekuisa chisimbiso tepi yezvipfeko zvinodzivirirwa
Ichi chigadzirwa ndicho chigadzirwa chedu chakatengwa zvakanyanya kubva pasirese COVID-19 denda muna 2020. Imhando yePeva isina mvura tambo yakagadzirwa nezvinhu zvinowirirana, iyo inoshandiswa pakurapa isingaite mvura pamakumbo ezvipfeko zvekudzivirira. Kazhinji tinogadzira upamhi 1.8 cm uye 2cm, ukobvu 170 micron. Enzanisa ...